ခြင်တွေက ဘာကြောင့်မို့ ကိုယ့်ကိုပိုကိုက်နေရတာလဲ?
အားလုံးထိုင်နေတာ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ခြင်တွေစုကိုက်နေတာ....
လူတွေအများကြီး စုထိုင်နေချိန် ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း ခြင်ကိုက်ခံနေရတယ်။ မိသားစုနဲ့ ညဘက် တီဗီအတူကြည့်နေချိန်ဆို ကိုယ်က အလင်းထဲထိုင်နေလည်း ကိုယ့်ကိုမှ ခြင်တွေက ရွေးပြီးကိုက်သလားလို့တောင် ထင်ရတယ်။ သူများတွေက ခြင်ကိုက်တယ်လို့ ပြောသံမကြားဘူး။ ကိုယ့်မှာသာ ခြင်ရာဖုတွေ ဗရပွနဲ့။ ဘာလို့လဲ?
လန်ဒန်က Hygiene and Tropical Medicine ကျောင်းက သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအရ ကိုယ့်ကိုမှ ခြင်တွေက ပိုကိုက်ရခြင်းဟာ ခြေအိတ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးသား ခြေအိတ် အစုံ ၂၀၀ ကို အသုံးပြုကာ လေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခြင်တွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်များ ရွေးပြီးကိုက်ရသလားလို့ စမ်းသပ်လေ့လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုံးစုံ ထပ်တူညီနေတဲ့ အမြွှာနဲ့ ရိုးရိုးအမြွှာ လူတွေဆီက ခြေအိတ်တွေကို အသုံးပြုကာ လေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ လေထုတ်ပန်ကာနားမှာ ခြင်တွေကို ထားလိုက်ပြီး ဘယ်ခြေအိတ်တွေက ခြင်တွေကို ကိုက်ချင်စိတ်ပိုဖြစ်စေသလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမြွှာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဘာလို့ စမ်းသပ်ရတာလဲဆိုတော့ ယခင်လေ့လာမှုတွေအရ ခြင်းတွေဟာ အမြွှာတွေကို ပိုရွေးပြီးကိုက်တာကို တွေ့ခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ခြင်တွေ ပိုကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လို့ ပြောဖို့ခက်တယ်လို့ ဦးဆောင်လေ့လာသူ ဂျိမ်းစ်လိုဂန်က ပြောပါတယ်။ သူများနဲ့မတူဘဲ ကိုယ်က ပိုပြီးခြင်ကိုက်ခံရတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ အနံ့ကြောင့်သာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ဂျိမ်းစ်က ယူဆပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေက လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ကို ပြောင်းလဲသွားစေပြီး ယင်းအနံ့ကြောင့်သာ ခြင်တွေကိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။